New York Guta Ikozvino Rinoda COVID Yekudzivirira Chipupuriro cheImba Yekudyira, maGyms neTheatre
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » New York Guta Ikozvino Rinoda COVID Yekudzivirira Chipupuriro cheImba Yekudyira, maGyms neTheatre
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Chidimbu chitsva chichaiswa mukati kusvika Nyamavhuvhu naSeptember uye zvinoda kuti vashandi vanopinda mune mamwe masisitendi kuti vanga vaine imwechete yedhizaini yeCovid-19.
New York City ine imwe yemitero yepamusoro yekudzivirira munyika.
Vanotenderedza 66% yevakuru veNew York vakabaiwa jekiseni kare.
New York nyika yaive imwe yeakanyanya kurohwa neCOVID-19.
Zano idzva rine hukasha rekuti vanhu vabaiwe jekiseni vachipesana neCOVID-19 rakaziviswa na New York City Meya Bill de Blasio nhasi.
Meya we NYC achisimbisa kuti zviitiko zvakaita sekudyira mumba uye kuenda kumitambo yekurovedza muviri zvichangoitirwa vanhu vakabaiwa jekiseni re coronavirus.
"Nzira chete yekuchengetedza dzimba idzi mudzimba ndedzekuti kana wabayiwa nhomba," meya akazivisa neChipiri, achinongedzera kunetseka pamusoro pekupararira kwakakurumidza kweDelta.
Chidimbu chitsva chichaiswa mukati kusvika Nyamavhuvhu naSeptember uye zvinoda kuti vashandi vanopinda mune mamwe masisitimendi kuti vange vaine imwe nhanho yemushonga weCovid-19. Izvi zvinogona kuratidzwa kuburikidza nekadhi rekudzivirira kana majekiseni ekushandisa.
De Blasio haana kupinda mune zvakanangana nezvekuti iro basa raizosimbiswa sei. Vakati mitemo iyi yakatanga kushanda musi wa 16 Nyamavhuvhu, asi kuongororwa hakuzoitwi kusvika muna Gunyana 13.
Meya akazivisa kare kuti vese vashandi veguta vachakurumidza kudiwa kubaiwa nunaGunyana, kana kuti vachatofanira kuongororwa vhiki nevhiki.
Vanoda kusvika 66% yevakuru veNew York vakabayiwa kare - imwe yemitengo yepamusoro munyika - asi nyika ndiyo yakanyanya kurohwa neCOVID-19.